जब विश्व सन् २०२० को आगमनमा उत्सवको तयारीमा जुटेको थियो, त्यतिबेला चीनको ऊहान सेन्ट्रल अस्पतालका आपतकालीन विभागका डा. ली वेनलियाङ्गले सातजना यस्ता बिरामी फेला पारे जो फोक्सोको बिमारी ‘निमोनिया’ बाट पीडित थिए । ती सबैलाई क्वारेन्टिनमा राखियो । ३० डिसेम्बरमा आफ्ना सहकर्मीसँग प्राइभेट वीच्याट म्यासेजिङ्ग एपमा डा. लीले ‘सार्स’ (सिभर एक्यूट रिस्पेरटरी सिन्ड्रोम) को नयाँ चरण आएको हो कि भन्ने आशंका जनाए ।
सार्स कोरोनाभाइरसकै एउटा रुप हो । पहिलोपटक यो चीनमै सन् २००३ मा देखिएको थियो । त्यसपछि यो २६ देशमा फैलियो । यसको चपेटामा ८ हजारभन्दा बढी मानिस परेका थिए । यद्यपि डा. लीले जुन बिमारीको पहिचान गरेका थिए, त्यो सार्सको दोस्रो चरण थिएन, त्यो त कोभिड–१९ (सार्स–कोभ–२) को पहिलो चरण थियो ।
इम्युनोलोजीका प्रोफेसर क्रिस्टियान एन्डरसन भन्छन्, ‘हाम्रो पहिलो प्रश्न हमेशा यही हुन्छ, यो के हो ?’ एन्डरसनको लेबोरेटरीलाई संक्रामक रोगका जीनोमिक्स अध्ययनकोे विशेषज्ञ मानिन्छ । भाइरस जनावरबाट मानिसम्म कसरी पुग्यो र त्यसपछि यति ठूलो मात्रामा कसरी फैलियो, यसको पत्ता लगाउने प्रयास उनीहरु गरिरहेका छन् । डिसेम्बरमा अस्पतामला कोरोनाभाइरसको पहिलो बिरामी भर्ना भएको केही घण्टामै बिरामीको स्वाबको विश्लेषण ऊहान इन्स्टिच्यूट अफ भायरोलोजीका वैज्ञानिकहरुले सुरु गरे ।
प्रोफेसर एन्डरसन भन्छन्, ‘हाम्रो दोस्रो प्रश्न यही छ कि यसको उपचार कसरी गर्न सकिन्छ ? यसका लागि परीक्षण गराउने भाइरस संक्रमण फैलने तरिका बुझ्न जरुरी हुन्छ ।’ उनका अनुसार हाम्रो तेस्रो प्रश्न यो छ कि हामी यसका लागि खोप कसरी विकसित गर्न सक्छौं ? यसको जवाफ भाइरसको जेनेटिक्सको ब्लू प्रिन्टबाट नै प्राप्त हुन्छ ।